မြန်မာလို နည်းပညာ PDF စာအုပ်များ ၁၀၃ အုပ် ~ သာလွန်အောင်
Digital Video Editing (10.83MB) (Download mediafire ) DOS = Command (8.3MB) (Download mediafire) Easy Computer Basic By Myo Thura (15.54MB) (Download mediafire) English For Computer User (586.49KB) (Download mediafire)
Photoshop NOTE (2) (Download jumbofiles) (Download jumbofiles) Photoshop 1 (5.5MB) (Download mediafire)
ကွန်ပျူတာမှာ 7.45 GB Free ရအောင်အသုံးပြုနည်း (214KB) (Download jumbofiles) Email This
မသိရူး12:01 pmshare ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါjava စာအုပ်တွေ ဆွဲလို့ရ၀ူးဗျReplyDeletehtakekhaungtin1:26 pmအသုံးဝင်သော စာအုပ်များကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် အတိုင်းအဆမရှိကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောပါရစေReplyDeletemyat thuko2:01 pmmediafire link တစ်ချို့က taken down by ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုပြီး မရှိတော့ဘူးReplyDeleteပြုပြုကြီးလေးယောက်9:44 pmလင့်တွေသေနေတယ်ဗျဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ပေးစေလိုပါတယ်စာအုပ်ကောင်းတွေပါလို့ပါReplyDeleteSwann Yee4:08 am်ဖိုင်တွေ removed လုပ်ခံထားရပါတယ်။ReplyDeleteSwann Yee4:08 amဖိုင်တွေ remove လုပ်ခံထား၇ပါတယ်။ReplyDeleteWillam Chan11:29 amဖိုင်များဒေါင်းမရပါဗျာ။ ဖိုင်တွေဒေါင်းတာကိုFile Removed for Violation.The file you requested has been removed from MediaFire foraviolation of our Terms of Service.This file has been taken down by:Company: LeakIDEmail: herve.lemaire@leakid.comStill have questions or do you think we've made an mistake? Check our knowledge base for more information or contact us about it.ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဒေါင်းတာ 26-12-2012 မှာပါ။ ကူညီပေးပါအုံးဗျာ ReplyDeleteWillam Chan11:30 amMediaFire ကဖိုင်တွေဒေါင်းမရပါဘူးဗျာ။File Removed for Violation.The file you requested has been removed from MediaFire foraviolation of our Terms of Service.This file has been taken down by:Company: LeakIDEmail: herve.lemaire@leakid.comStill have questions or do you think we've made an mistake? Check our knowledge base for more information or contact us about it.ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။ ကူညီပေးပါအုံးဗျာ။ReplyDeletethuralwin.ummg8:08 pmစာအုပ်တွေကတော့ မဖတ်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရောင်ကို အစိမ်းနုသုံးထားတော့ ဖတ်ရတာ သိပ် အဆင်မပြေချင်ဘူးခင်ဗျ။ ReplyDeleteရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ်2:28 amကျေးဇူးတင်ပါတယ်၇ှင့်ReplyDeleteko zar myint myint7:13 pmဘယ်စာအုပ်မှဒေါင်းမရဘူးReplyDeleteMiketee2:06 pmဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာစာအုပ်တွေက ဒေါင်းမရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ခင်ဗျာကူညီပေးပါ ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာReplyDeleteMiketee11:10 amဆရာတင်ထားပေးထားးတာတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ....ဒါပေမယ့် ဆရာ စာအုပ်တွေက ဒေါင်းလို့မရပါဘူးဆရာ...mediafire မှာ ဖျက်ထားတယ်ချည်းပြောနေပါတယ် ဆရာကျွန်တော်က Java စာအုပ်တွေကို ဒေါင်းချင်တာပါဖြစ်နိုင်ရင် လင့် အသစ်ပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာReplyDeleteုkyawkayw11:09 pmစာအုပ်တွေ လုံးဝ ( လုံးဝ ) ဒေါင်း လို့မရပါခင်ဗျာစာအုပ်ကောင်းတွေ မို့ နှမြောမိပါတယ်....ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ....ReplyDeleteုkyawkayw11:11 pmစာအုပ်တွေ လင့်သေနေပါတယ်ခင်ဗျာ ..လုံးဝ ဒေါင်းလို့မရပါ... စာအုပ်ကောင်းတွေ မို့ နှမြော မိပါတယ်...ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...ReplyDeleteAdd commentLoad more...